ကျစ်လစ်သော နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နွေဦး ပြန်လာ Pneumatic Actuator > ကျစ်လစ်သော နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator
AOX-P ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော နွေဦး ပြန်လာ pneumတစ်ဦးtic တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ အသုံးချ သို့ လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, dတစ်ဦးmpers သို့မဟုတ် rotတစ်ဦးry mတစ်ဦးchတွင်es.It ကျယ်ပြန့် သက်ဆိုင် သို့ ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စက္ကူ ချမှတ်ခြင်း, စွမ်းအား စက်ရုံ, အပူ, အလင်း စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် အခြား စက်မှုလုပ်ငန်း။ အဆိုပါ AOX-P ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော နွေဦး ပြန်လာ pneumတစ်ဦးtic တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ သငျ့လျြောသော fသို့မဟုတ် တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ hတစ်ဦးrsh တွင်dustriတစ်ဦးl တစ်ဦးpplicတစ်ဦးtions, နှင့် မြင့်သော positionတွင်g ကို တစ်ဦးccurတစ်ဦးcy နှင့် ကျစ်လစ်သော construction.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း pတစ်ဦးrtner တွင် Chတွင်တစ်ဦး.
operating မီဒီယာ: အပူပိုင်းသို့မဟုတ် lubricated လေ, non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေနံ။
AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator များအတွက် 1. Indicator သည်။
2. ထိပ်တန်း / ခြမ်း mounting စံ။
3. အောက် mounting စံ
AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator ၏ပိုတငျးထုတ်ကုန်များ၏ Interchange နှင့်ဘက်စုံသုံးအာမခံဖို့ ISO5211, DIN3337 (F03-F25) ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအညီတည်ဆောက်နေကြသည်။
4. နှစ်ဆသရုပ်ဆောင်နှင့်နွေဦးပြန်လာမော်ဒယ်များနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တူညီခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆုံးထုပ်အသုံးချဖို့တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်း။ ဒီ feature စာရင်းလျော့ကျစေပါတယ်နှင့် modular နွေဦးကျည်တောင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်, လယ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါလေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဖိအား AOX-P ကို၏ခန္ဓာကိုယ်သို့ကြွလာ လေထုထဲကနေနှစ်ခု piston အကြားစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator ဝင်ပေါက် (2) နှင့်ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်စဉ်၏အဆုံးဆီသို့ piston တွန်း ယင်းဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတစ်ဦးချင်းစီကြီးစွန်းမှာစမ်းရေပေါက်တို့သည်အတူကျုံ့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည် ဝေဟင်ကနေဖြန့်ချိသည့် piston နှင့်ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်အကြားလေကြောင်း ဝင်ပေါက် (4) ထိုအတောအတွင်းည, piston ၏ထိန်သိမ်းက output ရိုးတံ (ဂီယာမောင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း anticlockwise လှည့်ဖို့ဘီး) ။ လေထုအရင်းအမြစ်၏ညှနျကွားပြီးနောက် ဖိအား solenoid valve များကပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အဆုံးမှာစမ်းရေပေါက်ကိုစတင် reset နှင့် piston ယင်းနှင့်အတူ elasticity နေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီသို့အတင်းအကျပ်နေကြတယ် လေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) မှဖြန့်ချိနှစ်ခု piston အကြားလေကြောင်း။ ဤအတောအတွင်းက output ရိုးတံ (ဂီယာဘီး) တစ်ပြိုင်နက် piston ၏ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ယာရစ်လှည့်ရန်။ (ထို piston ကနေကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်အတွက်စုဝေးနေလျှင် တစ်ဦးချင်းစီကတခြား, ထို output ကိုရိုးတံတဲ့အခါမှာပြောင်းပြန်ဦးတည်လှည့်ထွက်လှည့်လိမ့်မယ် စမ်းရေပေါက်) ဟုအမည်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောသရုပ်ဆောင် SO ရိုက်ထည့် reverse, reset
1. ကျနော်တို့အနှစ် 20 ကျော်အဘို့ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့, ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းနှင့် AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator ၏ထုတ်လုပ် R & D ကိုအတွက်အထူးပြုနေကြသည်။
2. ကြှနျုပျတို့ oa စနစ်, ERP စနစ်, CRM စနစ်, စီမံခန့်ခွဲမှုမှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်မ, ထိန်းချုပ်ရညျအသှေးရှိတစ်ဦး informationization companyï¼ဖြစ်ကြသည်။
3. ကျနော်တို့ကလျင်မြန်စွာပြီးနောက်-ရောင်းအားတုံ့ပြန်မှုယန္တရားရှိသည်။ ကျနော်တို့ပြီးနောက်-အရောင်းကိစ္စရပ်များတွင်ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကပြဿနာကိုရှာတွေ့မှနည်းပညာစီစဉ်များနှင့်လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator ။
AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator အကြောင်းကိုငွေပေးချေသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်းမေး:
Q: ပြီးနောက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့သင့်ရဲ့ quotation အများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုခံယူနိုငျသောအခါငါသည်သင်တို့၏ AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပါက?
hot Tags:: ကျစ်လစ်သော နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်